Fitadiavan-tseza ho minisitra : Samy manao izay ho afany ny rehetra -
AccueilSongandinaFitadiavan-tseza ho minisitra : Samy manao izay ho afany ny rehetra
Taorian’ny fanolorana ny praiminisitra izay efa eken’ny rehetra dia mandeha indray izao ny fomba fitadiavan-tseza amin’ny alalan’ny fomba maro samihafa, ary izany dia tsy mifidy fomba fanao. Ekena aloha fa tsy maintsy hisy ny fanovana eo anivon’ny mambran’ny governamanta, satria tokoa ny fanapahana izay navoakan’ ny HCC dia mazava fa hifampitsinjarana ny toerana. Noho izany raha ho an’ny avy amin’ny fitondram-panjakana izao dia tsy maintsy ireo olona nahomby sy nahavita be tamin’ ny asa no ho voatazona, ankilany kosa ny an’ ireo avy amin’ ny hery politika sasany dia fantatra fa ny fiomanana amin’ny fanomanana fifidianana ihany no tanjon’ izy ireo. Eo amin’ izay fitadiavan-tseza izay dia efa samy manao izay ho afany ireo izay te ho minisitra, ny sasany izao dia mampiasa olona hiteny hanohana azy ho eo amin’ny toeran’ ny minisitra. Vao tsy ela akory izao ohatra ny nahatazanana ireo injenieran’ny asa vaventy mivondrombondrona milaza manohana olona hipetraka eo amin’ ny toeran’ny minisitra, mamy tokoa ny seza manoloana ny fahitana ireto injenieran’ny asa vaventy ireo, izay ampiasaina amin’ny fomba rehetra, saingy ny asa vita ihany no hifampijerena satria fampandrosoana no tanjona. Hatreto anefa dia misy amin’ ireo olona mitady seza ireo no tsy mahafehy akory ny minisitera izay ho takiany, saingy noho ny fananan’izy ireo fahefana dia mampiasa izay azo atao izy ireo.
Ho an’ ny sasany indray dia fantatra mazava izao fa tsy fampandrosoana no tanjony fa valifaty sy fitiavana hanakorontana tontolo misy azy fotsiny tsotr’izao, raha ny fantatra mantsy dia mikendry ny ho minisitry ny Serasera ihany koa i Lalatiana Rakotondrazafy izay mampiasa ny fahefana maha tompona gazety azy. Ho sarotra anefa ny hidirany amin’io toerana io raha amin’ny alalan’ny kaontina minisiteran’ny MAPAR no eritreretiny hahazoany ny minisitera, satria dia efa miady mafy io minisitera io ihany koa ny TIM izay mikendry ny hanokatra ny MBS. Ankoatra ireo ihany koa dia efa fantatra fa mikendry ny ho minisitry ny Filaminana anatiny ny depiote Jean Brunelle Razafintsiandraofa, izay efa fantatra fa miady mafy izany any amin’i Andry Rajoelina. Ry maitre Hanitra kosa ankilany dia mikendry ny minisiteran’ny Fitsarana ary mampiasa ny fahaizany sy ny fahefany mahay lalàna, hanodinana ny voalazan’ny fanapahan’ny HCC. Dia tahaka izany izao no fomba fiady amin’ny fitiavan-tseza izay eritreretin’ireo izay maniry ny ho ministra amin’izao fotoana izao, satria izay ilay marimaritra iraisana anton’ny fitokonana teny amin’ny kianjan’ny 13 mey.